Fianakaviana : ny anjara toeran’ny ray
Naseho ny : 8 desambra 2019
« Mila ray ny fianakaviana tsirairiray », hoy ny Papa François. Ny ray manam-pahendrena dia tokony hampianatra ny zanany hiaina ny amim-pahendrena sy hiteny amim-pahitsiana. Tokony hahay hampita ireo lova ireo ny ray. Tohizantsika ny katesizin’ny Papa François momba ny fianakaviana, iarahana amin'i P. Justolat E. Rafaralahimboa.
Fianakaviana: ny toetra tsy maintsy ananan'ny ray
Naseho ny : 6 desambra 2019
Tokony hahay hanitsy ny zanany, tsy hanala baraka azy ny ray ary mahay manasazy araka ny hitsiny, hoy ny Papa François, ka navoitrany fa raha hampita ny fahendrena sy ny fahitsiana, dia tsy maintsy miaraka aminy mandrakariva, manam-paharetana ary mamindra-fo. Indro ny tohin'ny katesizin'ny Papa François momba ny fianakaviana, iarahana amin'i P. Justolat E. Rafaralahimboa.
Naseho ny : 1 jolay 2019
Taom-pahasoavana ho an'ny mpino katolika malagasy ny taona 2019 satria hitsidika an'i Madagasikara ny Papa François. Fitsidihina antenaina fa hitondra fiadanana sy fanantenana ho an'ny vahoaka Malagasy
Pejy 6 amin'ny 6